Ukukhutshwa kweNcwadi! URenée Pawlish: IiNefili, iGenesis yoBubi | Martech Zone
Ukukhutshwa kweNcwadi! URenée Pawlish: IiNefili, iGenesis yoBubi
NgoLwesihlanu, Matshi 23, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndasebenza iminyaka emibini enesiqingatha noRenée kumzi-mveliso weNtengiso yeDatha yePhephandaba eDenver, eColorado. Njengabasebenzi abaninzi abanetalente, uRenée wayenendawo zokuyila ezandikhuphayo. Ndibe nethamsanqa ngokwaneleyo kwaye ndonwabile xa ndifunda imibhalo yencwadi yokuqala eyimfihlakalo kaRenée. Kwakufundeka okumangalisayo, kumnandi kwaye kungaqikelelwa!
URenée undibhalele nje kwaye undazise ukuba usandula ukumilisela incwadi yakhe elandelayo, Iifili zeGenesis zoBubi. Nantsi inkcazo:
Amandla amnyama achazwe kwiGenesis abuyela kwidolophu encinci yentaba yaseTaylor Crossing. Emva kokubona ubukho obubi kwisiXeko saseNew York, uRory Callahan uphuma eNtshona eyofuna iimpendulo, kwaye ufumana idolophu enikezela kumandla angaphezu kwendalo. Ngoku, ukuprofeta okubi kunokuzalisekiswa ziiNefili.
Okokuqala, ndiyavuyisana noRenée! Okulandelayo… kubo bonke abafundi abanomdla ngaphandle phaya, qiniseka ukufumana ikopi! Ukuza kuthi ga ngoku, uphononongo luyinto emnandi kwiAmazon kwaye iikopi zihamba ngokukhawuleza! Ke mna… ndiza kuthumela ikopi yam kuRenée ukuze ayityikitye! Nokuba ungumlandeli kaBronco.
Uthathe iBlog Break!